Kwa-Renault benze okuncomekayo nge-Scenic entsha | IOL Isolezwe
Kwa-Renault benze okuncomekayo nge-Scenic entsha
Isolezwe / 24 May 2012, 12:30pm /
IMINDENI izoyithokozela iScenic entsha ehlukene ngezigaba, okukhona kuyo ekwazi ukulayisha abantu abahlanu kanye nelayisha abagibeli abayisikhombisa. Injini endala engu 1.6 litre bayibuyisile kwa-Renault
IMOTO: Renault Scenic
SEBEPHINDE bawukhulisa umndeni wakwa-Scenic kwa Renault ngokwengeza enye ingane entsha ezalwe ngo 2012.
Ngike ngangena emishinini yabelungu sengikhohlwe nya ukuthi konje kwakuyimuphi unyaka ifika okokuqala iScenic kuleli.
Ngigcine ngitholile ukuthi kwabe kungu 1996 okwaba unyaka wokushintsha kwezinto emkhakheni wezimoto ezingama multi-purpose vehicle (MPV).
Iqiniso elibuhlungu kodwa elaziwayo ukuthi iScenic iyona eyahlahla indlela kulesi sigaba sezimoto base beyalandela nabanye.
Lesi sigaba siya ngokukhula njengoba nakwa-Toyota bengazibekile phansi nge-Avanza, kwa-Peugeot bane 3008 okuyimoto yomndeni.
Ngokusho kukaFabien Payzan, oyi-Marketing Vice-President kwa- Renault South Africa sekudayiswe izimoto ezingu 3,9-million kuze kube yilesi sikhathi, kanti iScénic ne Grand Scénic zilokhu zihamba phambili ngokudayiswa emazweni ase-Europe.
Kulokhu kwa-Renault bakhiphe i-five seater Renault Scénic ne-seven seater Grand Scenic okuyizimoto abathi zakhelwe abantu abanemindeni emikhulu futhi abakukhonzile nokuzikhipha.
I-Scenic five-seater ayidle ngasimanga kodwa bazamile ukuthi bayishintshe ngaphambili bazama ukuyenza ibe sa-sporty, yase iqumba.
Okunye abakufakile amalambu i-LED daytime running asetholakala nakunoma iyiphi nje imoto (bayenza indaba kwa-Audi).
Angeke ngibadlele umona kwa-Renault kwezobuchwepheshe ngoba iScenic ka 2012 isezingeni uma kubhekwa kwezobuchwepheshe.
Zisuka nje ebhandeni bakwethulela injini engu 1.6 dCi Energy turbodiesel okusho ukuthi isebenzisa udizili.
Le moto idunyiswa ngebhathini iStop-and-Start. Lobu buchwepheshe buyatholakala nakwi-Grand Scénic Dynamique.
Angazi ukuthi lokhu abakushoyo kuyiqiniso kanjani uma bethi injini engu-dCi Energy iphakathi kwezinjini zeFormula One kanye nezinjini ezitholakala ezimotweni zabo abazisebenzisa emjahweni yasemaqaqasini i-Off Road.
Ngiyabavumela uma bethi le njini i-1.6 dCi Energy enamandla ukuzedlula zonke ezisesigabeni sayo njengoba ingu 96 kW kanye ne torque engu 320 Nm okusho ukuthi bengeze i-torque ngo 20Nm ngaphezulu uma uyiqhathanisa neye 1.9 dCi ethatha indawo yayo.
Ezinye izindaba ezimnandi ngama Scenic ka 2012 ukuthi kuzokwengezwa nenjini engu 2.0 dCi Auto kwi-Grand Scenic BOSE Edition ebikade kukhulunywa ngayo isikhathi eside.
Injini ebivele ikhona i-1.6 16v esebenzisa u-petrol (ethandwa kakhulu ngothisha) isazolokhu ikhona. Le Scenic iphuma nezihlalo ezinhlanu namandla enjini angu 83kW kanye ne-torque efinyelela ku 151 Nm.
Kwezokuphepha iphuma ne-ABS brakes ehambisana ne-Emergency Brake Assist (EBA) ne-Emergency Brake force Distribution (EBD), kanye ne-ESP stability control ehambisana ne Hill Start Assist.
– Scénic 1.6 Expression	R259 900
– Grand Scénic 1.6 dCi Dynamique	R324 900
– Grand Scénic 2.0 dCi Bose	R379 900